Ampidino APK ho an'ny Android
Staff! Dia lalao simulation azonao lalaovina aminny findainao miaraka aminny rafitra fiasa Android. Mpiasa !, izay azoko faritana ho toy ny lalao simulasi finday tena tsara izay azonao lalaovina aminny fahafinaretana! Aminny lalao dia afaka miaina asa tena izy ianao aminny findainao. Azonao atao ny mandany ny fotoana malalaka aminny...
Idle Courier Tycoon lalao dia lalao simulation izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android. Te hanan-karena ve ianao? Ampidiro ny indostrianny fandefasana entana, manomboka orinasa avy hatrany am-boalohany ary tonga mpandraharaha tena manan-karena. Atombohy aminny maha iraka kely anao dia lasa goavambe mazava. ...
Cybershock: TD Idle & Merge dia lalao simulation izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android. Nanafika i Cyber ​​York City! Tsy maintsy ajanonao ny Emperoranny Crimson sy ny tafiky ny robot ratsy aminny vidiny rehetra. Mila anao izy ireo. Midira aminny Force Defense ary tariho aminny fanafihana ny miaramila...
Baby Bunny - Ny lalao My Talking Pet dia lalao simika mahafatifaty bunny izay azonao lalaovina aminny fitaovanao Android. Inona no tonga ao an-tsaiko rehefa miteny aho hoe ilay biby mitsambikina sy mihinana karaoty foana? Eny, mazava ho azy, ny bitro. Miomàna hikolokolo zazakely. Izay rehetra hampifaly azy ireo dia ny fifantohana sy ny...
Ny Perfect Expert 3D dia misongadina aminny lalao simulation ahafahanao milalao aminny findainao aminny rafitra fiasa Android. Mamaha ny olana aminny Perfect Expert 3D ianao, lalao simulation aminny finday lehibe azonao atao aminny fotoana malalaka. Mila mitandrina be ianao aminny lalao izay ezahanao hitady sy hamahana ireo olana aminny...
9 Months dia lalao simulation izay azonao lalaovina aminny findainao miaraka aminny rafitra fiasa Android. Afaka manana fotoana mahafinaritra ianao ao anatinny 9 volana, izay lalao finday izay manahaka ny fizotry ny zaza teraka. Afaka manana fotoana mahafinaritra aminny lalao ianao, izay sady manolotra traikefa aminny fanabeazana no...
Ny lalao Baby Full House dia lalao simulasi mahafinaritra izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android. Vonona ny hiala voly ao aminny trano nofinofin-jaza ve ianao? Fotoana handaniana andro miaraka aminny zazakely ary hanao traikefa nahafinaritra. Tokony ho azonao antoka fa manana fotoana mahafinaritra ry zareo...
Mirotsaha aminny hetsika royale miady mafy aminity mpitifitra finday tokana an-tampony ity. Makà fotoana ary mitandrema; Mety miafina any ambadiky ny zoro ny fahavalo. Safidio ny maso miafina anao, ampitaio fitaovam-piadiana sy fitaovana tadiavinao izy ireo ary hamita ny iraka! Raha te-hiditra aminny ACT: Team Anti-Terrorist dia ampidino...
Kill the bug game dia lalao simulasi angano izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android. Ny lalitra dia nahazo ny hozatra hatrizay taminny fotoana sasany taminny fiainantsika. Miaraka aminny feonizy ireo sy ny fipetrahany tsy tapaka, nampahatezitra antsika rehetra izy ireo. Ary koa, satria mpandatsa-drà izy ireo...
Tongava blockbuster vaovao aminny indostrianny sarimihetsika: Manangana empira sarimihetsika any Hollywood izay hamokatra sarimihetsika ary an-tapitrisany no hijerenizy ireo. Raha tianao ny lalao Idle Tycoon Management, handroaka anao ity lalao fanaovana sarimihetsika vaovao ity. Mahazoa vola arakaraka ny itomboanny fanjakanny boaty ary...
Tombontsoa sy tontolo iainana amoron-dranomasina tsara tarehy miandry anao eo ambaninny onja ao aminny Tontolo Abyssrium vaovao. Manitatra mahita faritra vaovao, samy manana lohahevitra tsy manam-paharoa, miaraka aminny loko misy ny mason-tsivana sy ny maodely malalaka. Mampiasà haran-dranomasina sy ahidrano miaraka aminny haingon-trano...
Car Parking Multiplayer dia iray aminireo lalao fiara alaina indrindra ao aminny Google Play. Na dia ny fijanonanny fiara aza no anaranny lalao dia lalao eranizao tontolo izao misokatra izy ity, ka mahafinaritra kokoa noho ny lalao fiara mifototra aminny iraka. Raha tianao ny lalao fiara, dia tokony hapetrakao tokoa ny Car Parking...
Cooking Simulator no simulator fandrahoan-tsakafo vaovao sy lalao an-dakozia. Miomàna hanombohana ny dianao mahandro aminny simulator fandrahoana! Ampidino ny Simulator Cooking Milalao lalao fisakafoanana ve ianao, mahandro mahandro, lalao fanaova-mofo, lalao sakafo haingana na lalao fanafarana sakafo? Tianao ny mahandro? Tianao ny...
Sushi Roll 3D dia lalao Android manaingoana izay hitantananao trano fisakafoanana manolotra sakafo Japoney. Sasao, tetehina ary horonana mba hamoronana sushi tsara indrindra aminity lalao mahandro mahavariana ity. Arakaraka ny ahodinkodinao ny sushi no mahasambatra ny mpanjifanao ary arakaraka ny habetsaky ny vola ho azonny trano...
Ny Fish Master! Dia jono, misambotra lalao trondro izay misongadina aminny sehatra Android miaraka aminny fisiani Voodoo. Maka ny toeranny mpanjono lehibe ianao ao aminny lalao, izay manintona ny tenany miaraka aminny tsipika sary miaina minimalist, mahasarika maso. Manandrana misambotra trondro betsaka araka izay tratranao irery ianao....
Bike Stunt Master, izay isanireo lalao hazakazaka Android, dia lalao finday maimaimpoana tanteraka. Ilay lalao, izay misy sary tsara kalitao sy atiny antonony, mampanantena antsika minitra mavitrika sy mailaka. Ilay lalao hazakazaka finday, izay navarina 1 tapitrisa mahery tao aminny Google Play ary manome fotoana fohy ho anny mpilalao,...
Novokarinny Timuz Games, Bike Master 3D dia lalao hazakazaka finday maimaimpoana. Ny lalao finday, izay misy haavo 50 isan-karazany, dia hanasongadinana sary mihetsika fizika sy sary kalitao 3D. Aminny lalao hazakazaka finday mahomby, izay misy môtô tsy manam-paharoa ihany koa, ny mpilalao dia afaka manatsara ny môtô raha iriny. Ny...
Ny Fruit Master dia manolotra kilalao mitovy aminny Fruit Ninja, ilay lalao fanapahana voankazo be mpampiasa indrindra aminny lalao finday. Miaraka amini Ketchapp, ny fotoananao dia mila tonga lafatra aminny lalao misongadina aminny sehatra Android. Ny lalao izay mizaha faharetana fa tsy reflexes, dia mandalo fotoana lavorary. Fruit...
Manorotoro ny Castle: Siege Master dia lalao piozila finday izay manapotika ny tranonny fahavalo aminny catapult. Raha mankafy lalao manimba tilikambo izay mitaky paikady ianao dia tokony hanome fotoana ity lalao ity, izay manambatra sary tsara sy lalao mahafinaritra. Maimaimpoana ny misintona sy milalao! Crush the Castle: Siege Master...